10ka Shaqo ee ugu mushaarka badan ee Injineerinka ah: Injineerrada ugu mushaarka badan. -
Bogga ugu weyn 10ka Shaqo ee ugu mushaarka badan ee Injineerinka ah: Injineerrada ugu mushaarka badan.
Su'aalaha sida kuwa injineerada ugu mushaharka badan ama maxay yihiin shaqooyinka injineernimada ugu mushaharka badan ayaa had iyo jeer ku jira luqadaha qoysaska, asxaabta, iyo ardayda da'da yar ee isku dayaya inay helaan heshiisyada ugu fiican naftooda.
Dembi maaha in la raadiyo caddayn, mid nolosha kuu dejin karta sidii qof doortay waxa lagu magacaabi karo shaqooyinka injineernimada ee ugu mushaharka badan ama qof ku soo baxay injineerada ugu mushaharka yar.
Muddo dheer, in qofku naftiisa u helo dhinaca khaldan ee mawduucan wuxuu noqon karaa sababta niyad-jabka iyo niyad-jabka maaha oo kaliya sababtoo ah waxaad ku dhameyn kartaa shaqada nolosha laakiin sababtoo ah haddii aadan bedeli karin markaad rabto, waxaad ku dambayn kartaa hagaajin.
Maqaalkani waxa loogu talagalay kuwa doorbidi lahaa inay ku faraxsan yihiin inay doortaan shaqooyinka injineernimada ee ugu mushaharka badan iyagoo ka mid ah injineerada ugu mushaharka badan halkii ay noqon lahaayeen kiis ka xun. Aan quusno.
Intee ayay adag tahay in la helo shahaadada injineernimada?
Waa maxay sababta Barashada Injineerinka ay aadka ugu adag tahay ardayda?
10 Injineer ee ugu Mushaarka Sare - Shaqooyinka Injineerinka
1. Injineerada shidaalka ($93,200)
2. Injineero koronto ($88,400)
3. Injineerada Kombiyuutarka ($86,000)
4. Injineerada hawada ($99,800)
5. Injineerada kiimikada ($92,700)
6. Injineerada agabka ($90,300)
7. Injineerada cilmiga bayoolajiga ($74,700)
8. Injineerada Nukliyeerka ($91,100)
9. Injineerada deegaanka ($79,300)
10. Injineerka xogta ($127,400)
Inta badan dadka ka fikira injineernimada waxay u maleynayaan inay tahay waddo toosan oo caajis ah iyo mid mustaqbalka uu had iyo jeer yahay hal jiho. Inkastoo tani run u noqon karto qaar ka mid ah injineerada kuwaas oo laga yaabo inay ka fekeraan maraakiibta hawada sare, gantaalada, iyo robots oo aan haysan nolol iyaga u gaar ah, isku mid maaha qof kasta.
Sawirka in injineerku caajis yahay waa khuraafaad la xaqiijiyay marar badan iyo mar kale inay khaldan yihiin.
Xaqiiqdu waxay tahay in goobta injineernimada ay ka buuxaan dad dhalaalaya oo soo jiidasho leh oo heer sare ah oo dhinacyo kala duwan leh oo leh dano kala duwan.
Goobta injineernimada waxaa lagu qeexay hal qiimee guud: had iyo jeer waa meesha ugu sareysa liiska xirfadaha mushaharka sare leh.
Injineerada waxay raaci karaan wadooyin kala duwan oo ay ku gaaraan shaqada injineernimada ee ay rabaan, taas oo ay u badan tahay inay bixiyaan mushahar wanaagsan oo ay la yimaadaan faa'iidooyin aad u wanaagsan, taasoo u oggolaanaysa xirfadlayaasha xirfadda inay si raaxo leh ugu noolaadaan iyagoo ka shaqeynaya mid ka mid ah meelaha ugu faa'iidada badan suuqa shaqada.
Shaqooyinka injineerada waxaa badanaa loo kala saaraa "STEM" (sayniska, tignoolajiyada, injineernimada, iyo xisaabta).
Dhammaantood waxay caadi ahaan u baahan yihiin shahaadada mastarka ama ugu yaraan shahaadada koowaad ee injineernimada, iyo sidoo kale xaddi la taaban karo oo waxbarasho gaar ah oo ku saabsan shaqada.
Kumanaan carruur ah oo mooday in injineernimada ay u muuqdeen kuwo soo jiidasho leh oo maqlay in injineerada ay helaan lacag aad u fiican ayaa sannad walba laga saaro koorsooyinka injineernimada.
Carruurtaas, inta badan, waxay lahaayeen diyaargarow yar iyo xitaa faham yar waxa injineernimadu ku saabsan tahay. Tan iyo maalintii ugu horraysay, way wareereen oo aad bay u wareereen.
Si aad u noqoto injineer, waa inaad leedahay aqoon dabiici ah oo xagga xisaabta ah. Mashiinnada, shirarka, iyo habraacyada dhammaantood waxay u baahan yihiin awoodda lagu sawirayo.
Waa in aad ka fikiri kartaa erayo aan la taaban karin. Dareen nidaam, borotokool, abaabul, iyo qaab dhismeed ayaa loo baahan yahay.
Sidoo kale akhri: 10 Injineerada Software -ka Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2022
Maxaa injineernimada ka dhigaya mid adag? Aad bay u adag tahay sababtoo ah barnaamijyada injineernimada waxay ujeedadoodu tahay inay ardayda u diyaariyaan shaqo.
Tani waxay keenaysaa in la baro sida loo xalliyo hawlo adag. Tani waxay u baahan tahay cilmi-baaris iyo dulqaad badan. Caadi ahaan, ardaydu inta badan waxay ku adag tahay xisaabta ama shaqada guriga.
Xoogagga koorasyadu maaha arrinta kaliya ee ay ardayda badankoodu la kulmaan markay dhammeynayaan shahaadada. Xitaa ardayga xisaabta iyo sayniska daciifka ah wuxuu mari karaa kulliyadda injineernimada isagoo leh go'aan ku filan iyo awoodo waxbarasho oo heer sare ah.
Caqabadda dhabta ah waa in ardaydu ay ku dhaqmaan anshaxa shaqada ee aan caadiga ahayn mid kasta iyo mid kasta oo adag oo ay qaataan haddii ay doonayaan in ay noqdaan mid ka mid ah injineerada ugu mushaarka badan.
Injineerada batroolka ayaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn xagga injineernimada, waxayna gacan ka geystaan ​​maareynta iyo horumarinta kheyraadka macdanta. Habka qodista waxa si badbaado leh dadka, bulshooyinka, duur-joogta iyo deegaanka uga dhigay injineerada batroolka.
Waxay sidoo kale wanaajiyaan hufnaanta waxayna ka dhigaan qiimaha mid ay heli karaan macaamiisha. Waxay gacan ka geystaan ​​madaxbannaanida tamarta iyagoo hubinaya u hoggaansanaanta hababka ugu wanaagsan, heerarka warshadaha, iyo shuruudaha deegaanka iyo badbaadada. Wax walba waxay u baahan yihiin isticmaalka tamarta.
Batroolka loogama baahna oo kaliya shidaalka iyo kulaylka, laakiin sidoo kale waxa loo baahan yahay samaynta caagadaha, caagadaha, naylon, spandex, saabuunta, dawooyinka dawooyinka, dunta, waxyaalaha la isku qurxiyo, cadarka, rinjiga, xabagta xumbo, iyo alaabooyin kale.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada batroolka waa $93, 200 kuwii ka shaqayn lahaa shaqooyinka foomka codsiga ama goobta shaqada.
Injineerinka korantada waa laan ka mid ah injineernimada oo daraaseysa abuurista koronto, iyo sidoo kale beddelkeeda qaabab iyo codsiyo kala duwan. Waa edbin ballaadhan oo injineernimada ka kooban mawduucyo kala duwan.
Korontadu waxa ay noqonaysaa mid aad muhiim ugu ah qof walba xiligan maanta lagu jiro horumarka joogtada ah,maadaama qofku aanu hal daqiiqo socon karin la’aanteed.
Waxaa jira sare u kac weyn oo dhanka farsamada ah oo la xiriira Injineernimada Korontada taasoo ka dhalatay baahida sare, sidaas darteed doorashada Injineerinka Korontada sidii dariiq shaqo ayaa faa'iido u yeelan doonta qaar badan oo naga mid ah.
Injineerada korantada ayaa ugu horrayn mas'uul ka ah naqshadeynta, horumarinta, tijaabinta, iyo kormeerka qalabka korantada sida nidaamyada socodka, nidaamyada isgaarsiinta, matoorada korontada, raadaarka, iyo qalabka korontadda.
Nidaamyada baahinta iyo isgaarsiinta, sida cayaartoyda muusiga la qaadi karo iyo nidaamyada meeleynta caalamiga ah, waxaa naqshadeeyay oo soo saaray injineerada korantada (GPS).
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada korantada waa $88,400 kuwa ka shaqayn doona shaqooyinka foomka codsiga ama goobta shaqada.
Injineerada kombuyuutarku waxay abuuraan, dhisaan, oo ilaaliyaan qalabka kombiyuutarka iyo software. Processors, looxyada wareegyada, iyo nidaamyada shabakadaha waxa nashqadeeyay, horumariyay, oo ay tijaabiyeen iyaga. Waxay mas'uul ka yihiin xallinta arrimaha hardware iyo software.
Waxay u abuuraan daawo degdeg ah dhibaatooyinka codsiga adag, caqabadaha maamulka nidaamka, ama arrimaha shabakadaha. Injineerada kumbuyuutarka ayaa mas'uul ka ah maareynta nidaamka iyo isdhexgalka.
Waxay sidoo kale eegaan nidaamka qaab-dhismeedkiisa xasilloonida, qaadidda, amniga, iyo miisaannaanta. CE waxay ka caawisaa injineerada ama soosaarayaasha softiweerka si ay u doortaan xalalka naqshadaynta habboon iyo hubinta waafaqsanaanta qaybaha nidaamka.
CE waxay gacan ka geysataa aqoonsiga xogta nidaamka, qalabka, iyo qaybaha software ee lagama maarmaanka u ah buuxinta shuruudaha isticmaale.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada kombuyuutarku waa $86,000 kuwii ka shaqayn lahaa shaqooyinka foomka codsiga ama goobta shaqada. Waxaa weli jirta fursadda horumarinta xirfadda si lacag loo sameeyo.
XIDHIIDHKA: 10 Shaqooyinka Golaha Guriga ee Sharciga ah oo Lacag Bixin Doona 2022
Injineerinka hawada sare waa laanta injineernimada ee ka shaqaysa horumarinta, tijaabinta, iyo samaynta diyaaradaha, hawada sare, iyo nidaamyada iyo qalabka la xidhiidha.
Injineernimada hawada iyo injineernimada cirbixiyeenadu waa laba qaybood oo muhiim ah oo is dul saaran oo goobta ka mid ah kuwaas oo dhaqan ahaan xooga saaray dhibaatooyinka ku xidhan hawada iyo duulimaadka hawada sare.
Injineerada hawada sare waxay abuuraan teknooloojiyada cidhifka ah waxayna ku daraan nidaamyada diyaaradaha ee gaadiidka, isgaarsiinta, sahaminta, iyo difaaca.
Nakhshadeynta iyo soo saarista diyaaradaha, dayax gacmeedyada, hababka kicinta, dayax gacmeedyada, iyo gantaalada, iyo sidoo kale naqshadeynta iyo tijaabinta diyaaradaha iyo alaabta hawada, qaybaha iyo qaybaha hoose, dhammaan tani waa qayb ka mid ah.
Injineerada aeronautical-ka ee guuleysta waxay helayaan mushaar aad u wanaagsan gaar ahaan hadda taas sida Elon Musk iyo Jeff Bezos waxay ku jiraan tartanka Mars. Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada aeronautical waa $99,800 kuwii ka shaqayn lahaa shaqooyinka foomka codsiga ama goobta.
Akhri: 10 Qandaraaslayaasha Ugu Mushaarka Badan Gobolka ugu Fiican
Injineerinka Kiimikada waa edbinta injineernimada oo ka shaqeysa horumarinta iyo hawlgalka hababka kiimikada. Waxay aad ugu tiirsan tahay Fiisigiska, Xisaabta, iyo Dhaqaalaha, si la mid ah qaybaha kale ee Injineerinka.
Injineerinka Kiimikada waxaa lagu kala soocaa meelaha kale ee injineernimada iyadoo xoogga la saarayo kimistariga iyo, xaaladaha qaarkood, bayoloji.
Nidaamyada waxaa ikhtiraacay, horumariyay, nashqadeeyay, hawlgeliyay, oo ay maamulaan injineerada kiimikada. Injineerada kiimikadu waxay abuuraan shay qanciya baahida bulshada.
Batroolka, kiimikooyinka batroolka, cuntada, agabka, kiimikooyinka gaarka ah, soosaarka tamarta, xakamaynta deegaanka, maaraynta qashinka, iyo bayotechnoolajiyada ayaa ah dhawr meelood oo ka mid ah meelaha aan doorka muhiimka ah ka ciyaarno.
Shaqada injineerada kiimikaad waa mid aad u ballaadhan oo dhan walba leh oo runtii faa'iido leh marka injineeradu maskaxdooda dhigaan.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada kiimikaad waa $92,700 kuwa ka shaqayn doona shaqooyinka oo ku dadaalaya culayska buuxa ee caqligooda iyo kartida ay ku xalin karaan dhibaatooyinka.
Injineerinka agabka waa hal goob oo ugu dhawaaqi lahayd dadka intooda badan ee aan ku jirin maadada injineernimada gabi ahaanba ama wakhti dheer maadaama aanay caan ahayn sida qaybaha kale.
Abuuritaanka macdan, dhoobada, polymeric, iyo walxaha isku dhafan waxay hoos yimaadaan nidaamkan injineernimada.
Waxay baartaa agabka caadiga ah sida birta, birta, naxaasta, aluminium, titanium, magnesium, iyo alaabo ay ku jiraan, iyo sidoo kale kuwa aan biraha ahayn, balaastikada, ceramics, iyo dhalooyinka, waxayna si joogto ah u abuurtaa agab cusub si ay u buuxiso shuruudaha naqshadaynta ee kala duwan.
Alaabooyinka noolaha, agabka shaqayn kara ee caqliga leh, nanocomposites, superalloys, electro-ceramics, iyo mowduucyo kale ayaa si qoto dheer loo baadhay.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada agabku waa $90,300 kuwii ka shaqayn lahaa shaqooyinka oo si buuxda u qaadanaya culeyska caqligooda iyo awooddooda ay ku xaliyaan dhibaatooyinka.
Codsiga tiro ka mid ah fikradaha injineernimada iyo hababka naqshadeynta daawada iyo bayoolajiga ee horumarinta daryeelka caafimaadka waxaa loo yaqaan injineernimada biomedical.
Shaqada injineerka biomedical waxaa ka mid ah abuurista qalabka biomedical iyo teknoolojiyadda si ay dadka uga caawiyaan inay soo kabtaan ama kor u qaadaan caafimaadkooda. Qalabka gudaha, sida xargaha ama xubnaha macmalka ah, iyo sidoo kale qalabka dibadda, sida xargaha iyo taageerada, ayaa tusaale u ah (orthotics).
Waxa kale oo laga yaabaa inay keento naqshadaynta iyo la qabsiga qalabka caafimaadka. Waa shaqo u baahan faham adag oo ku saabsan xisaabinta, bayoolajiga, iyo injineernimada, iyo sidoo kale maskax hal abuur leh iyo awoodaha xallinta dhibaatada.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Noqdo Hooyo Waqti-buuxa Wax-ku-ool ah 2022
Waxay adeegsadaan xisaabtooda, fiisigiska, bayoloji, iyo aqoontooda anatomy si ay u wanaajiyaan qalabka iyo nidaamyada, iyo sidoo kale ballaarinta tignoolajiyada daryeelka caafimaadka.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada biomedical-ka waa $74,700 kuwa ka shaqeyn lahaa shaqooyinka oo ku dadaalaya culeyska buuxa ee caqligooda iyo kartida ay ku xalin karaan dhibaatooyinka.
Dunida sida ay tahay, oo ay halakeeyeen aafada masiibada, la yaab ma leh in injineerada biomedical-ka ay ka mid yihiin injineerada ugu mushaarka badan.
Injineerada nukliyeerka waxay adeegsadaan aqoontooda xisaabaadka, fiisigiska, iyo injineernimada iyagoo fahamsan caqabadaha bulshada iyo deegaanka si ay u abuuraan dhirta tamarta nukliyeerka.
Waxay la tacaalaan nakhshad badbaado leh oo wax ku ool ah oo habab iyo nidaamyo kala duwan ah, sida dhirta tamarta nukliyeerka ee tamarta tamarta, ilaha tamarta nukliyeerka ee gaadiidka militariga ama hawada, nidaamyada qashinka shucaaca, iyo qalabka daawada nukliyeerka.
Injineerada nukliyeerka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka shaqeeyaan horumarinta alaabta, la socodka nidaamka tamarta nukliyeerka, hawlgalka warshad koronto, qashinka shucaaca, cabbirka shucaaca, iyo injineernimada.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada nukliyeerka waa $91,100 kuwii ka shaqayn lahaa shaqooyinka oo ku dadaalaya culeyska buuxa ee caqligooda iyo kartida ay ku xalin karaan dhibaatooyinka.
Injineerinka deegaanku wuxuu diiradda saaraa baabi'inta qashinka iyo wasakhowga si loo ilaaliyo deegaanka. Injineerada halkan jooga ayaa gacan ka geysta ilaalinta ilaha tamarta la cusboonaysiin karo oo ay sare u qaadaan isticmaalka agabka hadda jira iyaga oo wanaajinaya ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah. Waxay abuuraan wasakhaynta-xakamaynta iyo wasakhaynta-nadiifinta tignoolajiyada iyo farsamooyinka.
Injineerada deegaanku waxay ka shaqeeyaan hagaajinta sayniska iyo tignoolajiyada tayada hawada, tayada biyaha, ilaha biyaha, guryaha iyo meelaha kale ee la dhisay, horumarinta goobta cagaaran, iyo ilaalinta dhirta, xoolaha, iyo deegaanka.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada deegaanku waa $79,300 kuwii ka shaqayn lahaa shaqooyinka oo si buuxda u qaadanaya culeyska caqligooda iyo kartida ay ku xalin karaan dhibaatooyinka.
Waxay u badan tahay inaad maqashay ereyga "Macluumaad weyn,” suuqana si xawli ah ayuu u fidayaa.
Sannadka 2025, adduunka waxa la filayaa in uu soo saaro oo kaydiyo 200 oo Zettabytes oo xog ah. In kasta oo kaydinta xogtani ay tahay mid ku filan, ka soo saarista qiimaha mugga weyn ee xogta ayaa xitaa aad u adag.
Guud ahaan mugga xogta ganacsigu waxa ay ka korodhi doontaa ku dhawaad ​​hal petabyte (PB) ilaa 2.02 petabytes inta u dhaxaysa 2020 iyo 2022. Labadii sano ee la soo dhaafay, celceliska heerka kobaca sanadlaha waxa uu ahaa 42.2 boqolkiiba.
Injineerada xogtu waxay xaqiijiyaan in xogta ururku isticmaalo ay tahay mid nadiif ah, la isku halayn karo, oo diyaar u ah kiisas kasta oo isticmaal oo soo bixi kara. Injineerada xogtu waxay ku murmaan xogta xaalad u oggolaanaysa saynisyahannada xogta inay su'aalo ku sameeyaan.
Celceliska mushaharka dhexdhexaadka ah ee injineerada xogta waa $127,400 kuwa ka shaqayn lahaa shaqooyinka oo ku dadaalaya culeyska buuxa ee caqligooda iyo kartida ay ku xalin karaan dhibaatooyinka. Injineerada xogta ayaa hadda ka mid ah injineerada ugu mushaarka badan adduunka.
Akhri: 20 Shaqooyinka Ugu Lacag Badan Tamarta | 2022
Si kasta oo ay ahaataba sababaha ay u doorteen mid iyo ku biirista darajooyinka mid ka mid ah edbinta injineerada ugu mushaharka badan, xaqiiqadu waxay tahay in ay bixiso rajooyin ka wanaagsan.
Immisa Ayaa La Siiyaa Waalidiinta Korinaya?
barbaarinta korinta maaha hab lacag lagu sameeyo, inkastoo ay tahay shaqo waqti-buuxa ah. Waxaad kobcinaysaa…